1. Yamukela inkolelo-mbono yakamuva yokwakhiwa nendlela yokuqamba elungiselelwe yokugeleza kwezigaba ezimbili, sebenzisa i-CFD, i-CAE nobunye ubunjiniyela besimanje, ngokusebenza kahle kakhulu kwe-hydraulic nokusebenza kahle okuphezulu.
2. Kwelashwa okukhethekile ezingxenyeni ezigqokwa kalula njenge-diaphragm, i-impeller inlet, kanye nendandatho engaphandle yepuleti lonogada. IVolute nepuleti lonogada kudizayinelwe ukujiya okungalingani, futhi isigaba sokugqoka okulula ukujiya, okwenza ngcono kakhulu impilo yezingxenye zokugeleza.
3. I-impeller itheku isebenzisa ukonga ukubekwa uphawu kokuthambeka, okuthuthukisa umphumela wokubeka uphawu, kunciphise ukuguguleka nokuhuzuka, futhi kuqhubeke kuthuthukisa ukumelana nokugqoka.
7. Indawo yokuphuma kwepompo ingafakwa futhi isetshenziswe esikhaleni esingu-45 ° futhi ijikeleziswe kuma-engeli ahlukene ayisishiyagalombili ngokuya ngezidingo.
Spectrum Umdwebo kanye Nencazelo KXZ Series slurry Pump